Chinese Dust Turns South Korea into the Gobi Desert | South Korea travel news
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Korea Atsimo » Ny vovoka sinoa dia mamadika an'i Korea atsimo ho any an-efitra Gobi
Nifoha ny alatsinainy maraina ny Koreana Tatsimo niaraka tamin'ny vovoka mavo maloto rehefa nijery teo am-baravarankely. Korea atsimo rehetra dia rakotry ny vovoka efitra avy any amin'ny Desert Gobi avy any amin'ny faritra Mongolian anatiny ao Shina.
Ny herinandro tany Korea atsimo androany dia namadika ny tany ho tany Desert Gobi ny Alatsinainy. Nisy tafio-drivotra mahery mavo mahery avy any amin'ny tany efitra any avaratr'i China sy Mongolia nanarona an'i Korea Atsimo rehetra.
Namoaka fampitandremana vovoka mavo ho an'i Seoul sy ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ny firenena ny manampahefana Koreana Tatsimo.
Ireo Koreana miaraka amin'ny fangatahana olom-pirenena hijanona ao anaty trano
eTN Reader Andriamatoa Cho dia nilaza hoe: “Rehefa mifoha aho dia matetika no mahita an'io fomba fijery io avy any amin'ny tranoko. Afaka mahita ny tsipika tendrombohitra eo alohan'ny tranobe apt maro aho. Fa ankehitriny, Seoul dia eo amin'ny mavo vovoka mailo. izany vovoka nanarona ny tsipika an-tendrombohitra zahana. Mampiseho ny maha-zava-dehibe ny kalitaon'ny rivotra,
Ny haben'ny poti-vovoka madinidinika kely kokoa noho ny 10 micrometre ny savaivony, fantatra amin'ny anarana hoe PM 10, dia nisondrotra hatramin'ny haavon'ny "tena ratsy" any amin'ny faritra Seoul lehibe kokoa sy ny faritra hafa rehetra, hoy ny manampahefana.
Tamin'ny 10 maraina, ny salan'isa isam-bolana an'ny PM 10 dia nahatratra 1,115 microgram isaky ny metatra toratelo tao Daegu, 842 micrograms tao amin'ny tanànan'ny atsimo andrefan'ny Gwangju, 508 micrograms any Seoul ary 749 micrograms ao afovoan-tanànan'i Daejeon, hoy ny fanjakana Ivotoerana fanaovana fikarohana momba ny kalitaon'ny oniversite nasionalin'ny fikarohana momba ny tontolo iainana.
Marihina fa ny PM 10 isan'ora dia nitombo hatramin'ny 1,348 micrograms tany amin'ny faritra Daegu, sahabo ho 300 kilometatra atsimoatsinanan'i Seoul.
Ny manampahefana momba ny toetr'andro eto dia manasokajy ny fitanana ny PM 10 eo anelanelan'ny zero sy 30 micrograms ho "tsara", eo anelanelan'ny 31 sy 80 ho "mahazatra", eo anelanelan'ny 81 sy 150 ho "ratsy" ary mihoatra ny 151 ho "tena ratsy".
Ny ambaratonga PM 10 dia nahatratra tampon'isa 545 micrograms tany Seoul ny Alatsinainy maraina teo, hoy ny ivon-toerana, ary nanamarika fa i Busan sy ny nosy atsimon'i Jeju dia nanoratra ambaratonga ratsy indrindra an'ny PM 10 nahatratra 235 sy 267 microgram tsirairay avy.
Ny kalitaon'ny rivotra any Seoul, Korea atsimo
Nanazava ny foibe fa ny firenena iray manontolo dia iharan'ny tafio-drivotra mahery izay nipoitra tany amin'ny faritra Mongolianina anatiny ao avaratr'i China sy ny Desert Gobi any Mongolia ny zoma ary nifindra nianatsimo tamin'ny alàlan'ny fitsangatsanganan'ny rivotra avaratra andrefana.